Maalintii la qorey af-Somaliga oo 45 sano ka soo wareegtay: sawirada munaasabada - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maalintii la qorey af-Somaliga oo 45 sano ka soo wareegtay: sawirada munaasabada
Maalintii la qorey af-Somalifa ayaa 45 sano ka soo wareegtay.
Gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta Soomaaliya C/qaadir Nuur Xuseen oo furitaanki munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka taariikhda qorista farta Soomaaliga, marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay iyo dadaalladii lagu bixiyay arrintaasi.
Prof. Ciise Maxamed Siyaad oo ah ku xigeenka gudoomiyaha Akadeemiyada ayaa ka hadlay qiimaha qoraalka Farta Soomaaliga isagoo ku boorriyay bulshada in ay u soo jeestaan soo nooleynta qiimaha afka Soomaaliga.
Wasiirudowlada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare C/raxmaan Maxamed Cabdulle oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ahmiyad gaar siineyso sidii xafiisyada dowladda iyo dugsiyada waxbarashada looga hirgelin lahaa farta Soomaaliga iyadoo wasaaraddu fulineyso baaqii R/wasaare Kheyrre ee ku wajahnaa isticmaalka farta Soomaaliga.
Sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir aya ka hadlay dhibaatooyinka Soo wajahay afka Soomaaliga, iyo baahida loo qabo in la soo nololeeyo afka Soomaaliga.
R/wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, oo xafladdaasi ka hadlay ayaa sheegay in xukuumaddu ay ku dadaali doonto sidii dugsiyada dalka iyo xafiisyada dowladda looga hirgelin lahaa isticmaalka farta Soomaaliga.
Si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa qeyb ka ah dadaallada ay Akadeemiyadu ugu jirto soo nooleeynta Afka Soomaaliga, waana sanadguuradii 45 ee ka soo wareegtay markii la hirgeliyay qorista farta Soomaaliga uuna soo baxay wargeyskii ugu horeeyay ee ku qoran farta Soomaaliga taasoo ku asteysneyd sanadkii 1973-dii.